MACLUUMAADKA TARANKA EEYAHA EE PYRENEES WEYN IYO SAWIRRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Eeyaha ee Pyrenees Weyn iyo Sawirro
Tacoma ka socota khadadka shaqada (bidix) oo leh Tundra oo ka socota khadadka show (midig) labadaba waxay u shaqeeyaan sida eeyaha ilaaliyaha adhiga.
Eyga Buurta Pyrenean
Pyrenees Mountain Eyga
Ey Pyrenean ah
Pyrenees-ka Weyn waxaa sidoo kale loo yaqaan Eyga Buurta Pyrenean-ka. Dhererka eeyga ayaa waxyar ka dheer kan dheer. Madaxa waa qaab-cufan leh taaj yar oo wareegsan wuxuuna u dhigmaa jirka intiisa kale. Khadadka dambe waa heer. Xuubka afku wuxuu u eg yahay dhererka dhakada dambe. Qalfoofku wuu ballaadhan yahay sida uu u dheer yahay dhabannadiisa oo fidsan. Ma jiro joogsi muuqata. Sanka iyo bushimaha ayaa madow. Ilkaha waxay ku kulmaan maqas ama qaniinyo heer ah. Indhaha mugdiga ah ee mugdiga ah, ee dhexdhexaadka ahi waa yicib qaabaysan oo jilicsan. Buni madow, dhegaha V-qaabeeya ayaa loo qaadaa si hoose, fidsan oo ku dhow madaxa, lagu soo koobo talooyinka, isla markaana la dhigo heerka isha. Laabta ayaa si caddaalad ah u ballaaran. Dabada baalallayda ah ee sifiican u baalasha gaadhayaa waxay gaadhayaan hockska waxaana lagu qaadi karaa meel hoose ama xagga dambe ee giraangirta marka eeygu faraxsan yahay. Mararka qaarkood dabuub baa jira dabada dhammaadkeeda. Pyrenees-ka Weyn waxay leeyihiin hal dhibic oo keliya oo ku saabsan lugaha hore iyo cawro laba-lugood ah lugta dambe. Eygu wuxuu leeyahay jaakad laba jibbaaran oo u adkaysata cimilada. Koodhka hoose waa cufan yahay, waa hagaagsan yahay oo waa dhogor badan yahay, jubbadda korena way dheer tahay, qaro weyn tahay, wey roon tahay oo waa fidsan tahay. Waxaa jira maro ku wareegsan garbaha iyo qoorta taas oo ka muuqata eeyaha labka ah. Waxaa jira baalal dabada ah iyo dhabarka lugaha. Koodhku waa mid cad ama cadd adag oo leh dhejisyo buluug ah, yeey-cirro leh, casaan-bunni ah ama jaalle midabkeedu yahay.
Pyrenees-ka weyn waa ilaaliye karti leh oo xaddidan, oo u heellan qoyskiisa, isla markaana xoogaa ka feejignaanaya shisheeyaha-aadanaha iyo canine. Waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu ilaaliyo xoolaha. Markaan laga xanaajin, waa deggan tahay, edeb leedahay oo xoogaa culus. Geesi, aad u daacad ah oo adeeca. Jilicsan oo kalgacal leh kuwa uu jecel yahay. Qoys u heellan xitaa haddii naf-hurid loo baahan yahay. Waa mid aad ugu jilicsan qoyskeeda iyo carruurteeda. Waxay ku fiican tahay carruurta marka laga soo qaado iyaga ee ka soo baxa eeyaha, iyo haddii aan loo isticmaalin sidii ilaaliye shaqeynaya hubso inaad is dhexgal si fiican ayey ula socdaan dadka, meelaha iyo sawaxanka. Waxay leedahay dabeecad madaxbannaan, waana laga yaabaa inay isku daydo xukuma milkiile amnigiisa ka yar yahay ama hooseeya , iyo / ama milkiile yaa wuxuu ula dhaqmaa eeyga sidii inuu yahay aadanaha, madax adag noqosho ama dhuleed . Milkiilayaashu waa inay ahaadaan adag, laakiin deggan , kalsooni iyo waafaqsan eeyga. Dejinta xeerar eygu waa inuu raacaa oo ku dhegaa iyaga. Pyrenees-ka waa shaqaale culus, laakiin aad u madax-bannaan. Dulqaad yeelo goorta tababarka Pyrenees-ka weyn, maxaa yeelay xoogaa wey adkaan kartaa. Haddii keligiis looga tago guriga gudihiisa iyadoo aan la siinin qaddarka saxda ah ee jimicsi iyo ama hogaamin wuxuu noqon karaa mid wax dumiya . Pyrenees-ka Weyn wuu ku fiican yahay xayawaan aan xashiish ahayn , oo badanaa jecel bisadaha . Eeyahaani ma gaaraan qaan gaar illaa ay ka gaarayaan ilaa 2 sano jir. Qaarkood kuma fiicna xadhigga oo way iska wareegi karaan. Waxay u baahan yihiin milkiile fahmaya kuna dhaqma dabeecadda dabiiciga ah . Pyrenees-ka waaweyni waxay u muuqdaan kuwo aad u ciyo badan qaarna waxay u muuqdaan kuwo hoos u dhacaya oo xaragoonaya.
Dhererka: Ragga 27 - 32 inji (69 - 81 cm) Dumarka 25 - 29 inji (63 - 74 cm) waa celceliska dhererka, laakiin qaar Pyrenees ah ayaa dhererkoodu yahay 40 inji (1 mitir)
Miisaanka: Ragga laga bilaabo 100 rodol (45 kg) Dumar ka socda 85 rodol (38 kg)
sawirro ey ey Mareykan ah
Nooc u eg , hip dysplasia, laf kansarka , patellas raaxo leh. Waxay ku dhici kartaa dhibaatooyinka maqaarka cimilada aadka u kulul.
Pyrenees waxay u baahan yihiin jimicsi fara badan si ay qaab ahaan ugu ekaadaan. Haddii aysan si firfircoon uga shaqeyneynin inay yihiin ilaaliyeyaal adhi, waxay u baahan yihiin in la qaato maalin kasta, dheer socod socod .
Cadayashada joogtada ah ee jaakada dheer ee dheer waxay ku hayn doontaa xaalad wanaagsan, laakiin taxaddar dheeri ah ayaa loo baahan yahay marka eeyga uu daadinayo jaakaddiisa cufan. Dharka kore ma bislaado haddii aanu jirin wax bur ah, dawaco ama shay kale oo dibedda ka mid ah oo ku dhegsan jaakadda. Tani waxay dhibaato u noqon kartaa eeyaha dibadda ka shaqeeya. Milkiilayaasha qaar waxay doortaan inay xiiraan jubbadaha xagaaga si looga fogaado inay taasi dhacdo, laakiin iska jir qoraxdu . Maydho ama shaambo qallalan oo keliya markii loo baahdo. Great Pys waa la daadiyaa sanadka oo dhan laakiin si xoog leh ayaa loo sameeyaa sanadkiiba mar.
Pyrenees-kii Weyn wuxuu ka soo jeedaa Bartamaha Aasiya ama Siberia. Taranka ayaa ka soo farcamay Reer Hungary Kuvasz iyo Maremma-Abruzzese . Pyrenees sidoo kale waa qaraabo ka mid ah St Bernard , ka qayb qaadanaya horumarinteeda. Waxay leedahay taariikh dheer sida eeyaha ilaaliyaha ah. Eeyadu waxay u sii socdeen Yurub, Pyrenees-ka Weyn wuxuu ku sii hadhay gobollada buuraha dheer ilaa qarniyadii dhexe, markii ay si tartiib tartiib ah caan ugu noqdeen sharafta Faransiiska sida eey ilaaliye ah. Dabayaaqadii qarnigii 17aad, nin kasta oo Faransiis ah oo sharaf leh ayaa doonayay inuu mid yeesho. Waxay ku hubaysan yihiin qoorta jilicsan iyo jaakad qaro weyn, Pyrenees-ka Weyn ayaa ka ilaaliyay adhiga nugul kuwa ugaarsada sida yeyda iyo orsada. Pyrenees-ka waawayn wuxuu cadeeyay inuu yahay nooc aad u fara badan oo u shaqeeya sida eeyga samatabbixinta eeyaha, sida gaari-tuurista, eeyga sled, sida eeyaha baakadka ah ee safarada barafka, ilaaliyaha adhiga, eeyga dagaalka, iyo wehel iyo difaac qoyska iyo hantida. Xisbiga AKC wuxuu si rasmi ah u aqoonsaday Pyrenees-kii Weyn 1933.
buluug sanka buluugga ah iyo feer isku dhafka
Tacoma (aka Taco) sida eey yar oo ah 12 toddobaad
Lahaanshaha sawirka Majesta Great Pyrenees
'Tundra (bidix) khadadka eyga show, iyo Tacoma (midig) safafka shaqada, labadoodaba waxay ka wada shaqeynayaan sidii ilaalada adhiga ee beerta. Tundra waxay leedahay jaakad aad u qaro weyn. Intuu shaqeynayo, burrs iyo ulo ayaa lagu dhejiyaa jaakadiisa waana in la shaqeeyaa ama la gooyaa. Tacoma, dhanka kale, waxay leedahay jaakad khafiif ah. Weli wey adag tahay marka la barbar dhigo noocyada badankood, laakiin aad ayey uga khafiifsan tahay dharka Tundra. Burrs iyo ulo si fudud uma qabsan doonaan jaakadeeda. Tundra, laga bilaabo khadadka bandhigga, ayaa ka baqdin yar shisheeyaha marka loo eego Tacoma. Tacoma waxay u egtahay inay ku qayliso shisheeyaha, waxay ilaalisaa masaafadeeda waxayna ku wareegtaa qofka ama dib ayey uga noqotaa ciyo iyo dabeylaheeda isla waqtigaas. Tundra (show khadadka) wali wuu ka feejiganyahay shisheeyaha si kastaba ha noqotee, waxay u badan tahay inuu u socdo si loo xoqo marka loo eego Tacoma. Aad iyo aad ayey dhif u tahay in Tacoma ay u dhowaato qof qalaad si loogu xannaaneeyo. Way fogeysaa masaafadeeda, wey ciyeysaa, laakiin ma muujiso astaamo dagaal jir ahaaneed. Habeenki Tacoma waxay umuuqataa in ay ka feejigan tahay Tundra Tundra inta badan hal meel ayey joogi doontaa habeenka halka Tacoma ay mari doonto soohdinta guriga in kabadan, iyada oo ku ciideysa oo ceyrsaneysa wax kasta oo ay isleedahay malaha. Waxaan arkay Tacoma oo ceyrsaneysa dawacada guriga. Dawacadii waxay ku dhex martay xayndaabka, laakiin kuma badin. Digaaggu habeenkaa wuu nabad qabay! Tundra wuu ciyi doonaa habeenkii waxaanan arkay isaga oo daba ordaya xayawaan aan lahayn, laakiin aan ahayn sida badanaa Tacoma. Labada eeyba waxay ku noolyihiin banaanka iyagoo wata lo ', laba fardo iyo habeen socod bilaash ah oo ku wareegsan aqal digaag, digaaga guugga iyo digaaga, oo ay ka ilaaliyaan dawacada, rakoon , possum iyo skunk. Labadan adhi ee ilaaliya la'aanteed waxaan hubaa inaynaan shimbiro inaga hadhi lahayn. Waxay badbaadiyeen waqtiyo aan tiro lahayn.
Pyrenees Tundra weyn (gadaal) iyo Tacoma (hore) oo ilaalinaya xoolahooda ari
Waxaan soo iibsanay Osa, oo ah haweeney xayawaan ah, markii ay jirtay 2 bilood sanadkii 2008. Waxaa la geeyay iyada oo leh seddex ido ah iyo wan. Waxaan hadda haysannaa soddon adhi, oo ay ku jiraan 11 baraar ah oo dhashay illaa dhammaadkii Noofambar. Sawirkani waa mid ka mid ah dhaqankeeda ku saabsan wananka iyo mid ama laba ido oo kale. Waxay qaban doontaa muuqaalkan illaa 30 daqiiqo ama wax la mid ah, mararka qaarkood indhaha ayaa xiran, badanaa indhaha ayaa furan, waxayna umuuqataa Buddhist aad u badan. Ma jiraan dad kale oo weyn oo reer Pyrenees ah oo yaqaan dhaqankan ama arkay wax la mid ah? Kani waa eeyga adduunka ugu fiican. '
Tundra Pyrenees-ka weyn oo socod ku baxa
Eeg tusaalooyin badan oo Pyrenees-ka Weyn ah
Sawirada Pyrenees weyn 1
Sawirada Pyrenees weyn 2
Sawirada Pyrenees weyn 3
Sawirada Pyrenees weyn 4
Sawirada Pyrenees weyn 5
Sawirada Pyrenees weyn 6
Sawirada Pyrenees Weyn 7
Sawirada Pyrenees weyn 8
Sawirada Pyrenees weyn 9
Sawirada Pyrenees weyn 10
Sawirada Pyrenees weyn 11
toy / mini adhijirka australia
4 bilood jir german adhijir sawiro yar yar
sawirada eeyaha chow chow
ceel dibi iyo feeryahan